5 ဥရောပရှိမမေ့နိုင်သောသဘာဝသယံဇာတများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန် >5ဥရောပရှိမမေ့နိုင်သောသဘာဝသယံဇာတများ
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 24/10/2020)
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောတောင်ထိပ်များ, blooming ချိုင့်, ရေတံခွန်များ, ရေကန်များ, နှင့်ကွဲပြားခြားနားတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်, ကမ္ဘာ့မမေ့နိုင်သောသဘာဝသယံဇာတများတည်ရှိရာဥရောပ၏အိမ်ဖြစ်သည်. နွေ ဦး ရာသီတွင်ပွင့်လန်းသောကြီးမားသောစိမ်းလန်းသောမြေများကိုဖြတ်သန်းခြင်း,5ဥရောပရှိအလှဆုံးသဘာဝသယံဇာတများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သောအမျိုးသားဥယျာဉ်များမှာကမ္ဘာအနှံ့ခရီးသွားများအတွက်ကြိုဆိုသည်. သငျသညျတောင်တက်အပေါ်စိတ်အားထက်သန်နေတယ်ဆိုရင်, တောင်တက်သမား, သို့မဟုတ်သဘာဝရဲ့သန့်ရှင်းရာဌာနခံစား, သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ငါတို့ကိုချစ်လိမ့်မည်5ဥရောပရှိထိပ်တန်းမမေ့နိုင်သောသဘာ ၀ သိုက်များ.
1. အီတလီနိုင်ငံရှိ Belluno Dolomite သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး
Belluno သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးကိုတည်ထောင်ခဲ့သည် 1990 Dolomites ၏လှပသောရိုင်းသဘာဝကိုကာကွယ်ရန်. အတွက် Dolomite ၏ဆင်ခြေဖုံးတွင်တည်ရှိသည် မြောက်ပိုင်းအီတလီ, Belluno သဘာဝဥယျာဉ်သည်နွေ ဦး ရာသီ၌ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလှသည်. စိမ်းလန်းသောတောင်ကုန်းများနှင့်အံ့မခန်းဖွယ်တောင်ထိပ်များသည်ပန်းပွင့်များ၏ကော်ဇောများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည်. မည်သို့ပင်သင်၏ကြံ့ခိုင်ရေးအဆင့်ကို, သငျသညျဤသဘာဝအရံစူးစမ်းကောင်းတဲ့အချိန်ရပါလိမ့်မယ်, လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကတည်းက. ဥရောပရှိ Belluno သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးသည်အစပြုသူနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောတောင်တက်သမားများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
32000 ရှားပါးသစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်ထုံးကျောက်တောင်များဟက်တာ, Belluno ၏သဘာဝအရံသည် Cismon ချိုင့်မှ Piave ချိုင့်ဝှမ်းအထိကျယ်ပြန့်သည်. Piave ချိုင့်ဝှမ်းရှိကျေးရွာပေါင်းများစွာ၏ကျေးဇူးကြောင့်မတူကွဲပြားသောကြွယ်ဝမှုသည်သတ္တ ၀ ါနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတွင်ပါ ၀ င်သည်. ထို့ကြောင့်သင်သည်ဥရောပရှိ Belluno သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်သို့လည်ပတ်သောအခါ, သငျသညျအကြီးအသဘာဝအံ့ဘွယ်သောအမှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကျောက်မျက်ရှာဖွေရေးခရီးရှိသည်ဖို့အခွင့်အလမ်းရ.
Belluno သဘာဝအရံထက်လျော့နည်းသည်3ဗင်းနစ်ကနေနာရီပေါင်းများစွာ '' ရထားခရီးသွားလာ.
တောင်ခြေများစွာရှိသည်, B က&B က, နှင့်ဟိုတယ်များ.
Belluno သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ကျွန်ုပ်မည်မျှနေ့ရက်များသုံးစွဲသင့်သည်?
Belluno Dolomites အရံအကြီးမားဆုံးနှင့်တစ်ခုဖြစ်သည်5ဥရောပတွင်မမေ့နိုင်သောသဘာ ၀ သိုက်များ. လည်း, Belluno သည်လှပသောသဘာဝဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်သင်အနည်းဆုံးသုံးဖြုန်းသင့်တယ်3ကုန်းတွင်းစူးစမ်းရှာဖွေပြီးပျော်မွေ့သည့်ရက်များ, တောင်များ, နှင့်သဘာဝဘုန်း.
2. Hohe Tauern Resစတြီးယားနိုင်ငံ
ဥရောပအဲလ်ပ်တောင်တန်းများရှိအကြီးဆုံးသဘာ ၀ သယံဇာတကိုသြစတြီးယားတွင်တည်ရှိသည်. Hohe Tauern အရံနေရာတွင်နေထိုင်သည် 10,000 တိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်, 1,800 အပင်များ, နှင့် Grossglockner, သြစတြီးယားရဲ့အမြင့်ဆုံးအထွတ်အထိပ်, တွင် 4,798 ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်မီတာ. ဤသည်ထူးချွန်အထွတ်အထိပ်အကြားနေထိုင်သည် 200 အခြားအမြင့်, အစိမ်းရောင်သတ္တဝါ, တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရေကန်များ, နှင့်ရေတံခွန်များ.
Hohe Tauern သဘာဝအရံ၏ချိုင့်ဝှမ်းခမ်းနားသောရေခဲမြစ်များနှင့်ပြည့်၏, ရှေးဟောင်းနှင့် သာယာလှပသောရွာရှုခင်းများ, ပန်းပွင့်များ၏ကော်ဇော, နှင့်သစ်တောများ. ဤဥရောပသဘာဝဥယျာဉ်သည် visitors ည့်သည်များနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိဒေသများရှိကံကောင်းသောနေထိုင်သူများအတွက်သန့်ရှင်းရာဌာနဖြစ်သည်. အထူးသဖြင့်, Umbalfalle သဘာဝရေတံခွန်နှင့်မြစ်၏လမ်းကြောင်း, ဘယ်မှာသင်အချို့တွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ် အများဆုံးအံ့သြဖွယ်ရေတံခွန် ဥရောပမှာ.
Hohe Tauern သဘာဝဘေးမဲ့တောသို့မည်သို့သွားရမည်နည်း?
Hohe Tauern သဘာဝသယံဇာတသည် Mallnitz မြို့နှင့်အလွန်နီးကပ်သည်. ရထားဖြင့် Hohe Tauern သို့ဗီယင်နာအကြောင်းဖြစ်သည်5နာရီ.
Hohe Tauern ဥယျာဉ်ပတ်လည်မှာဘယ်မှာနေလို့ရမလဲ?
Mallnitz သည် Hohe Tauern ရှိနာမည်ကြီးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးနေရာထိုင်ခင်းရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်.
Hohe Tauern တွင်မည်မျှနေ့ရက်များသုံးသင့်သနည်း?
များစွာသောကွဲပြားခြားနားရှိပါတယ် Hohe Tauern ရှိတောင်တက်လမ်းကြောင်း သဘာဝအရံ, ဒါကြောင့်တစ် ဦး စီစဉ် 4-5 ရက်ပေါင်းခရီးစဉ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်. ဤနည်းအားဖြင့်သင်ပန်းခြံနှင့်မြို့များအနီးစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါသည်.
3. ပြင်သစ်တွင် Ecrins သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး
သငျသညျ French Alps ရှိဤအံ့သြဖွယ်သဘာဝအရံမှတဆင့်တိုးမြှင့်အဖြစ်, လင်းယုန်များကိုစောင့်ကြည့်ဖို့သေချာပါစေ, ဇော်ပိုင်, မိုးမခ, ၎င်းကိုအိမ်ဟုခေါ်သောအခြားရိုင်းတိရစ္ဆာန်များလည်းရှိသည်. ဥရောပအဲလ်ပ်တောင်ရှိဤရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောအရံသည်လှပသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် အမျိုးသားဥယျာဉ်များ သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အခွင့်အလမ်းရပါလိမ့်မယ်.
ရေခဲမြစ်များ, မြင့်သောတောင်တို့ကို၎င်း၊, alpine စိမ်းလန်းသောမြေများ, နှင့်လေကောင်းလေသန့်, Ecrins '' ရှုခင်းနှင့်ရှုခင်းသင်၏ဝိညာဉ်ကိုဖမ်းယူပါလိမ့်မယ်.
ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိမည်သည့်နေရာမှမဆို Ecrins အမျိုးသားဥယျာဉ်သို့သင်ရောက်ရှိနိုင်သည်. သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေသည်ပြင်သစ်နယ်စပ်နှင့်နီးကပ်သောအီတလီနိုင်ငံနှင့်တည်ရှိသည်. လိုင်ယွန်နဲ့နီးတယ်, မာဆေး, နှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိဂျီနီဗာ, ဒါကြောင့်ပြင်သစ်ကိုဖြတ်ပြီး Ecrins ကိုသွားဖို့ရထားဟာခရီးသွားရတာအကောင်းဆုံးပါ.
မိသားစုရင်းနှီးသောဟိုတယ်များမှသည်အားလပ်ရက်ငှားရမ်းခြင်းအထိဖြစ်သည်, Ecrins သဘာဝအရံပတ်ပတ်လည်နေရာထိုင်ခင်းရွေးချယ်စရာတစ်ခုမတူကွဲပြားမှုရှိပါတယ်.
သင့်အပေါ်မူတည်ပါတယ်. သင်အဘို့အအပ်နှံဖို့ဆုံးဖြတ်ရှိမရှိ7ရက်ပေါင်းသို့မဟုတ်တနင်္ဂနွေချိုးသွားပါ, မင်းဟာစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ခရီးတစ်ခုရလိမ့်မယ်.
4. Saxon ဂျာမနီနှင့် Bohemian ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိသဘာဝထိန်းသိမ်းရေး
Saxon ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောသဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေဖြစ်ပြီးဂျာမနီမှချက်သမ္မတနိုင်ငံအထိကျယ်ပြန့်သည်. Elbe ထုံးကျောက်တောင်များနှင့်ကမ္ဘာကျော် Pravcicka brana ကျောက်ဖွဲ့စည်းခြင်းသည်“ ခြင်္သေ့” ကိုပြသပြီးဖြစ်သည်, စုန်းမ, နှင့်ဗီရို "ရုပ်ရှင်. ဒီရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောသဘာဝအရံသည်ဥရောပရှိမမေ့နိုင်သောသဘာဝသယံဇာတများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။.
နွေရာသီသို့မဟုတ်ဆောင်းရာသီ, အစိမ်းရောင်လမ်းကြောင်းများ, နှင့်လမ်းကြောင်းကိုချောက်နှင့်မြစ်၏နှစ်ဖက်စလုံးတစ်လျှောက်ရှိအစိမ်းရောင်အပင်များကိုခွဲခြားရန်လွယ်ကူစွာမှတ်သားထားပါသည်. Saxon ဂျာမနီ, ဒါမှမဟုတ် Bohemian Switzerland, သင်၏မူလခရီးသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးသွားမည့်နေရာပေါ်တွင်မူတည်သည်, ကမ္ဘာတဝှမ်းမှခရီးသွားများအတွက်အံ့သြဖွယ်အိုအေစစ်နှင့်တောင်တက်ပရဒိသုဖြစ်သည်.
Saxon Germany သို့ဘိုဟီးမီးယားဆွစ်ဇာလန်သဘာ ၀ သယံဇာတများကိုမည်သို့ရယူမည်နည်း?
သငျသညျ၌ဤအံ့သြဖွယ်သဘာဝအရံရနိုင်သည် ဥရောပခရီးစဉ်အားဖြင့် ပရာ့ဂ်သို့မဟုတ် Dresden မှ.
Bohemian Switzerland မှာဘယ်နှစ်ရက်ဘယ်လောက်သုံးရမလဲ?
တစ်ရက်ခရီးစဉ်သည်လုံးဝမဖြစ်မနေလိုအပ်သည်, နှင့်သင်ရက်အနည်းငယ်ဖြုန်းနိုင်လျှင်, ထို့နောက်အလွန်အမင်းအကြံပြုပါတယ်.
5. ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ Ordesa နှင့် Monte Perdido သဘာဝဘေးမဲ့တော
စပိန်နှင့်ပြင်သစ်ကြားအလယ်၌တည်ရှိသည်, Ordesa နှင့် Perdido တောင်တို့သည်ဥရောပရှိအံ့ nature ဖွယ်အကောင်းဆုံးသဘာဝသယံဇာတများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. ၏ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့်အတူပြင်သစ်ဘက်မှာတည်ရှိပေမယ့် 3,355 မီတာ. Monte Perdido တောင်တန်း၏အမည်မှာနယ်စပ်ပြင်သစ်ဘက်မှမမြင်နိုင်သောကြောင့်၎င်း၏အမည်ကိုခံယူခဲ့သည်.
အံ့မခန်း Ordesa နှစ် ဦး စလုံးဖြစ်ပါတယ် ဥရောပရှိယူနက်စကို၏ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် နှင့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်တိရစ္ဆာန်များ၏ဇီဝထုအရံ. ၎င်းသည် Ordesa ချိုင့်ဝှမ်း၏နေရာဖြစ်သည်, ရေတံခွန်များ, အမျိုးမျိုးသောတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်, ရွှေလင်းယုန်အပါအဝငျ, နှင့် 32 နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်. Pyrenees တောင်တန်း၏မြင်ကွင်းကိုသင်တက်။ လေးစားမိသည်နှင့်အမျှ, Marmots ထွက်ကြည့်ဖို့သေချာပါစေ, Hawk, နှင့်ဇီးကွက်, အဖြစ်ကောင်းစွာ. ထိုကွောငျ့, Ordesa နှင့် Monte Perdido သဘာ ၀ သိုက်သည်မည်သည့်ခရီးသည်မဆိုဥရောပအတွက်အံ့သြစရာကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်.
မှ3နာရီ ''2ရက်ပေါင်းခရီးစဉ်, Ordesa ကွဲပြားခြားနားတောင်တက်လမ်းကြောင်းပေးထားပါတယ်, ကြံ့ခိုင်ရေး၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်သည်.
Ordesa နှင့် Monte Perdido သိုက်ကိုပြင်သစ်နှင့်စပိန်နိုင်ငံတို့မှရရှိနိုင်သည်. Zaragosa မှ Torla-Ordesa အထိဖြစ်သည်5နာရီသို့မဟုတ်3ဘာစီလိုနာမှနာရီ. သင်ပြင်သစ်ကိုခရီးသွားနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက် Toulouse ဖြစ်ပါတယ်7နာရီကွာ.
Torla မှာနေရာထိုင်ခင်းရွေးချယ်စရာများကိုသင်တွေ့နိုင်ပါသည်, တည်းခိုခန်းများနှင့်ဟိုတယ်များမှ.
Ordesa နှင့် Perdido တောင်တို့ကိုဥရောပနိုင်ငံ Yosemite ဥယျာဉ်အဖြစ်လည်းလူသိများကြသည်. ထိုကွောငျ့, အနည်းဆုံးတော့နေသင့်တယ်3ရက်ပေါင်း, တောင်တက်နှင့်အပန်းဖြေအချိန်အပါအဝငျ.
5 ဥရောပရှိမမေ့နိုင်သောသဘာဝသယံဇာတများသည်ကမ္ဘာ၏အံ့သြဖွယ်ရေတံခွန်များသို့မော်ကွန်းအမြင်များနှင့်တောင်တက်လမ်းကြောင်းများကမ်းလှမ်းသည်. ထိုကွောငျ့, အစိမ်းရောင်ချိုင့်ဝှမ်းကိုဖြတ်ပြီးတောင်တက်, ပန်းပွင့်လယ်ကွင်းများနှင့်တောင်ထိပ်များကိုနှစ်သက်ခြင်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်ပေးနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်သည်. ဥရောပ၏အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံများတွင်ရိုင်းသောသဘောသဘာဝထက် ပို၍ သက်သောင့်သက်သာရှိ၊.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, သင်၏အားလပ်ရက်ကိုရထားဖြင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်သို့ကြိုတင်စီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို“ မမေ့နိုင်စရာအကောင်းဆုံးသဘာဝသယံဇာတ ၅ ခု” ကိုသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာထဲသို့ထည့်သွင်းလိုပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url =https://www.saveatrain.com/blog/unforgettable-na...-reserves-europe/ ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, သင် / ja မှ / fr သို့မဟုတ် / က de နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများပြောင်းလဲနိုင်သည်.
Austrianaturereserve dolomitesiltaly သဘာဝတရား သဘာဝတရား သဘာဝတရား သဘာဝတရား travelgermany